Gods of Egypt (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.4/10 107760 votes
God of Egypt က Box Office မှာလညျး Deadpool ဇာတျကားရဲ့နောကျနံပါတျနှဈနရောမှာ ရပျတညျနေ တာပါ။ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသညျ့ သရုပျဆောငျတှကေတော့ Nikolaj Costerx Waldau, Brenton Thwatesc Chadwick Boseman, Elodie Yung, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Gerard Butler နှငျ့ Geoffrey Rush တို့ ဖွဈပါတယျ။ ရှေးဟောငျးအီဂဈြနတျဘုရားတှရေဲ့အကွောငျးကို ရုပျရှငျအထူးပွုလုပျခကျြတှဝေဝေဆောဆာနှငျ့ ပရိသတျ ကွီးအကွိုကျတှေ့ဦးမညျ့ ဇာတျကားတဈကားပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ . . . .
နတျဘုရားတှနှေငျ့လူတှဟော အတူရောနှောနထေိုငျလကျြရှိကွပွီး သူတို့ဟာ မွငျ့မားသညျ့အရပျအမောငျး၊ ရှရေောငျ သှေးနှငျ့တိရိစ်ဆာနျပုံပွောငျးနိုငျသညျ့ အရညျအခငျြးတှရှေိပါတယျ။ ဒီငွိမျးခမျြးနသေညျ့ကာလမှာ Osiris ဘုရငျကွီးကသူရဲ့ သားံHorus ကိုနနျးမှပေေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘိသိတျပှဲအခနျးအနားမှာ Osiris ကိုမနာလိုဖွဈနသေညျ့သူ့ရဲ့ညီ Set ကသတျကာ ထီးနနျးကိုလုပါတယျ။ သူအုပျစိုးစဉျကာလမှာ သဆေုံးသှားသူတှဟော နောကျဘဝကိုကူးဖို့အတှကျ တနျဖိုးကွီးကွီးပေးရမှာဖွဈတယျလို့ကွညောလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနှငျ့ Set ကို Horus ကစိနျချေါတိုကျခိုကျခဲ့ပမေယျ့ ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့ကာ Set က Horus ကိုသတျဖို့လုပျခဲ့ပမေယျ့ Horus ရဲ့ခဈြသူ Hathor ကတောငျးပနျတာကွောငျ့ Horus ရဲ့စှမျးအားတှရေဲ့အရငျးအမွဈဖွဈသညျ့ မကျြလုံးနှဈလုံးကိုဖောကျထုတျကာသဲကန်တာရထဲသို့ မောငျးထုတျထားလိုကျ ပါတယျ။သူတို့နှဈဦးတိုကျခိုကျနစေဉျမှာ သာမနျလူသားလယျသမားတဈဦးဖွဈသညျ့ Bek နှငျ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူ Zaya တို့ဟာလညျး လူခငျြးကှဲသှားခဲ့ရပါတော့တယျ။
တဈနှဈလောကျကွာပွီးနောကျမှာတော့ Set က Hathor ကိုလကျထပျ ထားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့အဖေ နနေတျဘုရား Ra အတှကျအထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျကွီး တညျဆောကျနခေဲ့တာပါ။ Bek က သူရဲ့ခဈြသူ Zaya ကိုဒီဆောကျလုပျရေး အလုပျသမတဈဦးအဖွဈတှရှေိ့ခဲ့ကာ Set ကိုပွနျလညျနှိမျနှငျးနိုငျဖို Horus တဈယောကျတညျးကသာစှမျးဆောငျနိုငျလိမျ့မညျဟုယုံ ကွညျတာကွောငျ့ Horus ရဲ့မကျြလုံးကို ပွနျလညျခိုးယူခဲ့ပါ တယျ။မကျြလုံးခိုးယူပွီးနောကျ Bek နှငျ့ Zaya တို့ ပွနျလညျထှကျပွေးခဲ့ရာမှာ Zaya တဈယောကျဒဏျရာအကွီး အကယျြရကာသဆေုံးသှားရပါတော့တယျ။ Bek ဟာ Horus ရှိသညျ့ နရောသို့ သှားကာ Horus ရဲ့ မကျြလုံးကို ပွနျပေးမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ အလဲအလှယျအနနှေငျ့သူ့ရဲ့ခဈြသူ Zaya ကိုပွနျလညျအသကျရှငျ အောငျလုပျပေးရမညျ လို့ဆိုရာမှာတော့ . . .
God of Egypt က Box Office မှာလည်း Deadpool ဇာတ်ကားရဲ့နောက်နံပါတ်နှစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နေ တာပါ။ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Nikolaj Costerx Waldau, Brenton Thwatesc Chadwick Boseman, Elodie Yung, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Gerard Butler နှင့် Geoffrey Rush တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းအီဂျစ်နတ်ဘုရားတွေရဲ့အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ချက်တွေဝေဝေဆာဆာနှင့် ပရိသတ် ကြီးအကြိုက်တွေ့ဦးမည့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ . . . .
နတ်ဘုရားတွေနှင့်လူတွေဟာ အတူရောနှောနေထိုင်လျက်ရှိကြပြီး သူတို့ဟာ မြင့်မားသည့်အရပ်အမောင်း၊ ရွှေရောင် သွေးနှင့်တိရိစ္ဆာန်ပုံပြောင်းနိုင်သည့် အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းနေသည့်ကာလမှာ Osiris ဘုရင်ကြီးကသူရဲ့ သားံHorus ကိုနန်းမွေပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိသိတ်ပွဲအခန်းအနားမှာ Osiris ကိုမနာလိုဖြစ်နေသည့်သူ့ရဲ့ညီ Set ကသတ်ကာ ထီးနန်းကိုလုပါတယ်။ သူအုပ်စိုးစဉ်ကာလမှာ သေဆုံးသွားသူတွေဟာ နောက်ဘဝကိုကူးဖို့အတွက် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနှင့် Set ကို Horus ကစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ကာ Set က Horus ကိုသတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့် Horus ရဲ့ချစ်သူ Hathor ကတောင်းပန်တာကြောင့် Horus ရဲ့စွမ်းအားတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ကာသဲကန္တာရထဲသို့ မောင်းထုတ်ထားလိုက် ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတိုက်ခိုက်နေစဉ်မှာ သာမန်လူသားလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် Bek နှင့် သူ့ရဲ့ချစ်သူ Zaya တို့ဟာလည်း လူချင်းကွဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။
တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ Set က Hathor ကိုလက်ထပ် ထားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အဖေ နေနတ်ဘုရား Ra အတွက်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်ကြီး တည်ဆောက်နေခဲ့တာပါ။ Bek က သူရဲ့ချစ်သူ Zaya ကိုဒီဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမတစ်ဦးအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ကာ Set ကိုပြန်လည်နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို Horus တစ်ယောက်တည်းကသာစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံ ကြည်တာကြောင့် Horus ရဲ့မျက်လုံးကို ပြန်လည်ခိုးယူခဲ့ပါ တယ်။မျက်လုံးခိုးယူပြီးနောက် Bek နှင့် Zaya တို့ ပြန်လည်ထွက်ပြေးခဲ့ရာမှာ Zaya တစ်ယောက်ဒဏ်ရာအကြီး အကျယ်ရကာသေဆုံးသွားရပါတော့တယ်။ Bek ဟာ Horus ရှိသည့် နေရာသို့ သွားကာ Horus ရဲ့ မျက်လုံးကို ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလဲအလှယ်အနေနှင့်သူ့ရဲ့ချစ်သူ Zaya ကိုပြန်လည်အသက်ရှင် အောင်လုပ်ပေးရမည် လို့ဆိုရာမှာတော့ . . .
Option 1 sharer.pw 600 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 600 MB SD (480p)
Option3megaup.net 600 MB SD (480p)
Option4Vip Server 600 MB SD (480p)
Option7megaup.net 1.4 GB HD (1080p)
Option 10 yuudrive.me 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 megaup.net 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 drive.google.com 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1